Pamwe chete nevanhu vakuru (uye vanotsigira), Delivra… takagadzira iyi inoshamisa infographic iyo ine zvese zvawanga uchida kuziva nezvekuti vanhu vari kushandisa sei nhare kuwana maemail avo. Delivra inopa nyanzvi yekutengesa email services pamwe neplatform yavo. Ivo inoshamisa kambani ine yakanakisa vanhu vane hanya chaizvo nevatengi vavo.
Kushambadzira kwenhare HAZVIENDE chero nguva munguva pfupi! Delivra inoda kukubatsira kugadzirira email yako kushambadzira nekuedza uye kugadzirira yako maemail nhare. Tarisa uone izvi infographic ye mobile email manhamba, ruzivo rwekuti vanhu vari kuwana kupi email uye mutengi kunetseka ne mobile email, uye zvimwe zvakawanda!
Tags: YeMahara neThebhu Kushambadziranharembozha emailnharembozha email kufunganharembozha email dhizainimobile email stats
Isingabatsiri uye Zvemagariro Midhiya Mhedzisiro
Izvi zvinonakidza chaizvo kuona Douglas, ndatenda!
Inonyatsotaura kune simba rekushambadzira kwenhare, kunyanya iyi nhamba: "Vanopfuura hafu (56%) yevatengi veUS vakatenga kamwe chete vachishandisa smartphone yavo vakaita izvi vachipindura meseji yekushambadzira yakatumirwa kuburikidza neemail nhare."
Kubvumirana, @ twitter-353825851: disqus! Nharembozha haichisiri kuita sarudzo zvekare - yave kuita baseline chinodiwa.
Man ichi chikuru ruzivo graphic. Unoda kuita imwe mobile kubata kumusoro munguva pfupi. Iyi nharaunda iri kukura nekukurumidza uye yakakosha inotungamira iri kuuya kubva kune vanoshandisa nhare. Ini ndinofanira kuti panguva ino ndiri kuseri kwesimba remagetsi mune nhare kudonha pasi. Yakakodzera e-mail fomati yefoni chimwe chinhu chinoda kutariswa pane munguva pfupi iri kutevera. Ini ndinofanira kubvumirana naMaria zvakare, iyo nhamba iri kutoshamisika kuti mukati meawa imwe chete 56% yevanoshandisa nharembozha vachitenga. Ruzivo rukuru. THX